'Breaking Borders' - extraordinary stories of migrants living in Johannesburg
Yesterday, Africa Day 25 May, a new 5-part series of radio documentaries chronicling the lives, challenges, dreams, and positive contributions of migrants living in South Africa, hit the airwaves. In "Breaking Borders," five migrants tell their stories of where they came from, what life is like for them in their new home, and what their goals are for the future.
By Deborah Walter 26 May 2011
ZMC pushes for creation of statutory media complaints body
The Zimbabwe Media Commission (ZMC) has begun the process of setting up a media complaints council to regulate journalists against unethical conduct, but critics charge the law under which such a body is being created will discredit the institution.
By Staff reporter 22 Feb 2011
Zimbabwe hikes media fees under draconian media law
NEW YORK: Zimbabwe's power-sharing government should repeal the Access to Information and Protection of Privacy Act (AIPPA), the Committee to Protect Journalists said late last week after a late 2010 amendment to the legislation hiked mandatory registration and accreditation fees for the press working in the country by as much as 400%.
[2011 trends] Zimbabwe: Brute force to silence the media
One of the first casualties in the onslaught against democracy is always the media. Elections, a key cornerstone of democracy, have been characterised in Africa generally, and in Zimbabwe in particular, by massive election fraud, voting irregularities, vote buying, voter and opposition party intimidation, bogus voter registration, rigged polling stations, corrupt election commissioners and so on.
By Wilf Mbanga 12 Jan 2011
WAN-IFRA raises press freedom concerns in Zim
The World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) and the World Editors Forum have addressed a letter to Zimbabwean President Robert Mugabe protesting against the latest series of journalist arrests in Zimbabwe and condemning the increasing climate of intimidation for the country's critical media.
Zim: Community radio lobby criticises government
The Zimbabwe Association of Community Radio Stations (ZACRAS) has criticised government for failing to license independent broadcasters in the country, describing recent changes to the Broadcasting Services Act (BSA) Act as saddening.
By Dumisani Ndlela 10 Nov 2010
ZACRAS establishes secretariat in Bulawayo
The Zimbabwe Association of Community Radio Stations (ZACRAS) has announced the establishment of a secretariat in Bulawayo, Zimbabwe to spearheard specific advocacy and lobby activities aimed at establishing community radios stations in the country.
Zim: Internet survives fall in media demand
The internet survived a slump in patronage or visibility that affected all the other media in Zimbabwe from Q4 2007 to Q4 2008, the Zimbabwe All Media Products and Services (ZAMPS) survey has revealed.
By Sam Hungwe 23 Mar 2009
Zim radio station broadcasts from Emirates
HARARE: A new radio station, Zimbabwe Community Radio, is broadcasting from the United Arab Emirates in a bid to create awareness on the value of community radio for development, freedom of speech and promotion of local culture especially among marginalised minorities in the country.